Axmad | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 38
Author Archives: Axmad	Dhageyso:Warka Subaxnimo.
Warka Subax waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta hoose. Dhagayso Warka subax 19 04 2016.lite	Read More »
Gelinkii dambe ee maalintii shalay ayaa weerar xoogan oo loo adeegsaday Miinooyinka laga haro Rumuut Controlka ayaa waxaa lala eegtay Bas weyn oo siday dad Rakaab Yahuud ah, kaas oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada Al-Qudus ee ku jirta gacanta gumeysiga Yahuudda. Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan sida ay muujiyeen sawirro laga soo qaaday Baabuurka oo gebi ahaanba ...	Read More »
Madaxweynaha dalka Faransiiska Franceo Holland ayaa booqasho ku tagay magaala madaxda dalka Masar ee Al-Qaahira isagoona halkas kula kulmay madaxweyanaha Afgembiga dalka Masar ee Siisi. Kadib kulan ay yeesheen labada madaxweyne waxay qabteen Shir jaraa’id oo wada jir ah oo ay kula hadleen Saxaafadda, waxaana Holland uu dhaliilay siyaasadda uu isticmaalayo Siisi ee la xiriirta dilka, kufsiga iyo qab-qabashada kooxaha ...	Read More »
Maanta oo Axad ah waxay golaha Wasiirada ee Yahuuda kulankooda todobaadlaha ah ku qaban doonaan dhulka Jowlaan ee Yahuuda xooga uga heystaan dalka Suuriya, waxaana kulankaas hogaaminaya Ra’iisul wasaaraha Yahuuda Bin Yamin Natanyahu. Kulanka golaha Wasiirada Yahuudda oo todobaad kasta dhaca ayaa ka duwan kuwii hore u dhici jiray marka laga hadlo goobta lagu qabanayo oo kamid ah dhulka Yahuuda ...	Read More »
Wasaaradda dagaalka Xukuumadda Mareykanka ayaa kudhowaad Toban Ruux oo katirsan Maxaabiista Muslimiinta ee kuu xiran xabsiga sumcada xun ee Guwantanamo waxay ku wareejisay xukuumadda Aala-Sucuud ee ka talisa dhulka Xarameynka. Maxaabiistan la geeyey dhulka Xarameynka ayaa tiradoodu waxay gaareysaa 9 Ruux oo dhamaantooda kasoo jeeda dalka Yaman, waxaana war kasoo baxay Mas’uuliyiin katirsan Bentagonka ay sheegeen in qorshahan lagaga gol ...	Read More »
Sarkaal sare oo katirsan Ciidamada dalka Yaman oo lagu dilay dalkaas.
Wararka ka imaanaya dalka Yaman waxay sheegayaan in dalkaas lagu dilay Sarkaal sare oo katirsan Ciidamada loogu yeero Sharciyada ee hoostaga xukuumadda magac u yaalka ah ee ka dhisan dalka Yaman. Sarkaalka la dilay oo lagu magacaabo Zayd Al-Xuuri ayaa ahaa Taliyaha guutada 314 ee Ciidamada Haadi, waxaana lagu dilay degmada Naham ee u dhow magaalada Sancaa. Sida ay sheegeyso ...	Read More »
Ciidamada Nusayriyada oo lagu jabiyay dagaal ay ku doonayeen iney dib ugula wareegaan magaalada Al-Ciis.
Maleeshiyaad katirsan Nidaamka Bashaar Al-Asad oo taageero ka helaya boqolaal katirsan Rawaafida xooga ku joogta Suuriya ayaa maalinkii shalay waxay dagaal culus kusoo qaadeen magaalada Al-Ciis oo dhawaan Jabhadda Al-Nusra kala wareegtay Nidaamka mujrimka Bashaar. Boqolaal katirsan Maleeshiyaadka oo taageero dhanka cirka ahna ka helaya Diyaaradaha Nidaamka ayaa weerar xoogan kusoo qaaday magaalada Al-Ciis, waxaana hadafkoodu ahaa iney magaalada kas ...	Read More »
Xarakada Dhaalibaan oo ku dhawaaqday howgallada Guga ee sanadla ah.
Xarakada Islaamiga ah Dhaalibana ayaa ku dhawaaqday iney bilaabeyso howlgallada sanadla ah ee ay fuliso marka la gaaro xilliga Guga ee Roobabku ka da’aan inta badan Caalamka. Bayaan kasoo baxay Xarakada ayaa lagu sheegay iney bilaabayaan Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah weeraro xoogan oo lagu dhiig bixinayo Shisheeyaha kusoo duulay dalka Afqaanistaan iyo ciidamada iyaga u adeega ee ay wataan. Imaaradu ...	Read More »
Qaraxayo lagu weeraray Saldhig Booliis oo ku yaala wuqooyiga Qowqaaz.
Shalay oo Isniin ahayd waxaa dalk Ruushka ka dhacay weeraro xoogan oo lagu qaaday Saldhig Booliis oo ku yaala gobol lagu magacaabo Istafroobal. Sida ay sheegeen madaxda Ruushka, weeraradu waxay ahaayeen kuwa naf hurnimo ah, waxaana lala beegsanayay Saldhig Booliis oo ku yaala magaalada Noofosilistakwi, waxaana illaa iyo hadda lasoo sheegin khasaare rasmi ah. Booliisa Ruushka waxa uu sheegaya iney ...	Read More »
Qabaa’ilka Muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Moosil oo ay maamusho dowladda Islaamiga ah ayaa sheegay iney diyaar u yihiin iney difaacdaan magaaladooda iyo guud ahaan gobolka, oo ay isku dayayaan Rawaafida iyo Reer galbeedka iney weerar kusoo qaadaan. Odoyaal katirsan waxgaradka Naynawaa, islamarkaana ah hogaanka Qabaa’ilka ayaa sheegay ineysan cabsi gelineynin taxaalufka iyo is uruursiga Gaalada iyo Rawaafida, iyagoo garwaaxsan ...	Read More »
Page 38 of 45« First...102030«3637383940	»	...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan